Manjaro dia hamela anao hisafidy eo amin'ny FreeOffice sy LibreOffice | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny Jolay, Manjaro Nanapa-kevitra ny hantsaka ny birao fiasan'ny birao malaza LibreOffice i Linux ho fanohanana azy FreeOffice de Softmaker. Ity fanapaha-kevitra ity dia nitondra tsikera marobe avy amin'ireo izay tia mampiasa rindrambaiko open source.
Ny ekipan'i Manjaro Mihaino ny fiarahamoninao aho ary manova ny fanapaha-kevitra hampidirina FreeOffice toy ny biraon'ny birao amin'ny toerana misy anao. Toy ny famotsorana manaraka, ny mpampiasa dia afaka misafidy raha hametraka FreeOffice na LibreOffice avy amin'ny installer Manjaro.
FreeOffice suite maimaim-poana izy io nefa tsy manana loharano misokatra. Ity dia kinova voafetra an'ny birao fiantohana premium avy any Softmaker, malaza amin'ny fahaizany mifanaraka tanteraka amin'ny Microsoft Office. Ireo kinova roa ireo dia misy ho an'ny Linux, saingy mila mandoa vola ianao raha hampiasa ny Premium.
Ny ekipan'i Manjaro dia nanazava fa tsy nisy ny fifanakalozana vola tao fanapahan-kevitra mampiditra FreeOffice toy ny biraon'ny birao default amin'ny rafitrao.
Amin'ny lafiny iray, Softmaker dia nitatitra fa ny mpampiasa izao dia afaka mitahiry rakitra amin'ny endrika Microsoft Office manokana toy ny DOC, XLS, PPT ary ODT. Ity endri-javatra ity dia nampiana ho ampahan'ny fifanarahana miaraka amin'i Manjaro.
Misy fizarana vitsivitsy izay tapa-kevitra ny hampiditra rindrambaiko loharano misokatra fotsiny, Manjaro tsy iray amin'ireny. Manjaro dia mifantoka bebe kokoa amin'ireo mpampiasa azy mahazatra afaka mahavita ny asany nefa tsy mila mandinika amin'ny antsipiriany.
Amin'ny farany ny fanapahan-kevitra tsara indrindra dia ny hanome ny safidin'ny mpampiasa, ireo izay manohana fatratra ny rindrambaiko open source dia hampiasa LibreOffice, raha ireo kosa te hanana rindrambaiko privative, fa milamina kokoa amin'ny teôria azon'izy ireo atao ny misafidy FreeOffice.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Manjaro dia hamela anao hisafidy eo amin'ny FreeOffice sy LibreOffice
BlazingSQL dia namoaka ny kaody loharano nomeny ho an'ny fampiasana GPUS hanafainganana ny fikirakirana data